प्रदेश3Archives - RatoKalam.com is No one news portal.
काठमाडौँ, १४ चैत प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक आन्दोलनबाट गणतन्त्रको स्थापना भई मुलुक सामाजिक न्यायसहितको समृद्धितर्फ अघि बढेकाले अब क्रान्तिका नाममा हिंसाको बाटो समात्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभएको छ । नेकपाको प्रदेश नं ३ को प्रथम बैठकको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब कुनै अधिनायकवादको...
हेटौंडा, ५ चैत्र । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवम् प्राईम टाईम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला जागरण अग्रज पत्रकारिता पुरस्कार–२०७५ बाट पुरस्कृत भएका छन् । स्टेट भिजन प्रालिद्वारा संचालित तु–खबर डटकमको दोस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको अवसरमा धमलालाई १५ हजार राशिसहित उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट मुलुकको सुशासन, विकास...
बोलेरोको ठक्करबाट विद्यार्थीको मृत्यु, चितवन तनावग्रस्त
चैत ४, चितवन । चितवनमा बोलेरो जिपको ठक्करबाट एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गकाे रत्ननगर–१ निपानीमा बोलेरोको ठक्करबाट १४ वर्षीय वसन्त थापाको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ । चितवनको रत्ननगरमा सडक अवरुद्ध गरिएको छ । जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्ने क्रममा थापालाई बसले ठक्कर दिएपछि घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको...
काठमाडौं, ४ चैत । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुहारी बिना मगरलाई मन्त्रीबाट हटाए अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई पनि हटाउनु पर्ने अडान राखेको स्रोतले बताएको छ। मन्त्रिपरिषद पुनरगठनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले बिना भन्दा खतिवडाको प्रगति विवरण कमजोर रहेकाले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई पनि हटाउनु पर्ने अडान राखेको...
नेकपामा अपत्यारिलो मोर्चाबन्दी : पूर्व एमाले प्रचण्डतिर, पूर्व माओवादी ओलीतिर !
काठमाडौं, ४ चैत । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आफ्नो गुट बलियो बनाउन नेता तानातान गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरु आफ्नो पक्षमा ल्याउन हरतरहको कसरत गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि अहिले पार्टीभित्र अनौठो कनेक्सन देखिएको छ...
काठमाडौँ, ४ चैत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भर्खरै एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले एक वर्षका उपलब्धिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अवस्था अस्तव्यस्त थियो, नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय कानून बनिसकेका...
नेतृत्वले पार्टीभित्र निर्वाचनपछिको तिक्तता मेट्न सक्नुपर्छ– डा शेखर कोइराला
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र निर्वाचनपछिको तिक्तता पार्टी सभापतिले मेट्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हाम्राकुरासंग भने, ‘सभापति शेरबहादुरजीले मिलाउनु हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर उहाँले मेट्न सक्नु भएको छैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘तिक्तता मेट्न सकिएन भने एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।...